Apple nwere ike iweta iko eji eme ihe n'ezie na 2017 | Esi m mac
Apple nwere ike ịmebata iko iko eziokwu na 2017
Na Febụwarị 5, na mmemme a maara nke ọma "N'izu a na teknụzụ", Apple kwurịtara ihe ga-ekwe omume, nke igosi okpu agha ma ọ bụ iko ndị ezubere maka eziokwu dị adị site n'aka ụlọ ọrụ ama ama nke foto anya m Carl Zeiss. N'ime mmemme ha sonyere Leo Laporte, Georgia Dow, na Peter Cohen na onye na-eme ihe ngosi bụ Scoble enyeghị ọtụtụ ihe ọmụma gbasara ihe e bipụtara ruo ugbu a, mana ha mere. Ha mere ọkwa ọkwa maka oge ọkọchị nke 2017 ma ọ bụ ọnwa mbụ nke 2018.
O doro anya na Apple ga-eji ụfọdụ eziokwu dị mkpa nke ụlọ ọrụ wee gosipụta iko yaDị ka nraranye nke isi ụlọ ọrụ Apple ọhụrụ ma ọ bụ ememe nke afọ 10 nke iPhone.
Dabere na Scoble, n'ihe metụtara ọkwa Apple kwuru, o kwuru, sị:
Nke a nwere ike ịbụ ihe nketa nke Tim Cook… n'eziokwu ọ bụ ihe nketa nke Steve Jobs.
Carl Zeiss nwere ụdị nke ezigbo eziokwu na ahịa. Ọ bụ banyere ihe nlereanya VR Otu Gụnyere, bụ ekweisi nwere ekwentị arụnyere, na-eme ka ọ bụrụ usoro eziokwu dị adị, nke yiri nke ahụ Samsung Gear VR o Google Daydream.
Kama, Zeiss keere na Jenụwarị gara aga na Ahịa Eletrọniki Gosi, ma ọ bụghị ihe ọ bụla dị na njikọ mebere eziokwu. Dabere na Scoble, Apple gaara arịọ ụlọ ọrụ nzuzo ka ọ zere ụdị asịrị ọ bụla ma ọ bụ na-ehi ehi.
Apple nwere mmasị na eziokwu ọ bụla, n'okwu nke Tim Cook. Mana o doro anya etu ọ ga-esi mepụta ngwaahịa ya na ngalaba a.
Na ngosipụta nke nsonaazụ emere na June gara aga, Tim Cook kwudosiri ike na-asị:
Anyị kwenyere na e nwere nnukwu ihe maka ndị ahịa na nnukwu ohere azụmaahịa. Ya mere, anyị na-etinye ego.
Banyere asịrị ahụ, anyị enweghị ike ịgọnahụ ma ọ bụ gosi ihe ọ bụla gbasara ya. Gịnị bụ nkwenye, bụ mmegharị na-ewe ndị ọrụ maka ngalaba dị iche iche, nke mepụtara ngwaahịa na ngwanrọ maka ahịa eziokwu dị adị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple nwere ike ịmebata iko iko eziokwu na 2017
Kedu ihe kpatara onyinye onyinye iTunes ji bụrụ onyinye kachasị mma?
New Orleans na-ezute obodo na Ozi Transportgbọ njem Ọha na Apple Maps